परिवार व्यवस्थापनमा सहयोगी ‘जन्मान्तर’ « Lokpath
कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कमला विकको पहिलो सन्तान छोरी छिन् । छोरी चार वर्षकी भइन् । कमला दम्पतीले भर्खरै अर्को बच्चा पाउने योजना बनाएका छन् । छोरी विद्यालय जाने भएपछि उनीहरुले अर्को बच्चा पाउने योजना बनाएका हुन् ।
“हामी दुई बच्चाबीच जन्मान्तर हुनुपर्छ भनी पहिल्यै तयार थियौँ, परिवारले अर्को बच्चा पाउन निकै दबाब दिएका छन् तर हामी दम्पतीबीच जेठी छोरी पाँच वर्ष पुगेपछि पाउने सल्लाह थियो”, कमलाले भनिन्, “अब छोरी विद्यालय जान थालिन्, हामी पनि अर्को बच्चा पाउने योजना बनाउँदैछौँ ।” कमलाका पति छविन्द्र विक पहिलो बच्चा हुर्केपछि अर्को बच्चा पाउँदा आमा र बच्चाको स्याहार हुने भएकाले आफूहरुले जन्मान्तर गरेको बताए ।
जानकी गाउँपालिकाकै सुनिता बुढाका दुई सन्तान छन् । उनका पहिलो र दोस्रो सन्तानबीचको जन्मान्तर पाँच वर्षको छ । सुनिताले पहिलो सन्तान जन्माइसकेपछि उच्च मावि तहको पढाइ शुरु गरिन् । पछि पतिको सल्लाहअनुसार दोस्रो सन्तान जन्माइन् । यसरी सन्तानबीचको जन्मान्तरले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिले समेत राम्रो रहेको उनी बताउछिन् ।
“विवाहलगत्तै पहिलो बच्चा जन्मियो, पहिलो बच्चा एक वर्षको भएपछि म पुनः कलेज जान थालेँ, ११ र १२ कक्षा पढेर सकेँ”, सुनिताले भनिन्, “दम्पतीबीचको सल्लाहबमोजिम पाँच वर्षपछि अर्को बच्चा पायौँ, हाल सजिलो भएको छ । ठूलो बच्चाले सानो बच्चालाई खेलाउन सक्छ ।” सुनिता जन्मान्तरका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा समेत ख्याल गर्न भ्याएको बताउँछिन् ।
“लगातार वा बर्षेनि बच्चा जन्माएका आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । उनीहरुको खानपानमा स्याहार पुग्दैन”, उनी भन्छिन्, “मेरो र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका लागि हामीबीच सहमति थियो, पहिलो बच्चापछि अस्थायी साधन प्रयोग गर्यौँ, जसले जन्मान्तरमा सघायो ।”
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका धना साउद सुत्केरी भएको एक महिना पुगेको छैन । यो उनको पहिलो सन्तान हो । उनी अब करिब तीन-चार वर्षपछि मात्रै अर्को सन्तान जन्माउने योजनामा छिन् । “जन्मान्तरबिना लगातार बच्चा जन्माएका आमामा धेरै स्वास्थ्य समस्या देखेकी छु । विशेषगरी ढाड र पाठेघरसम्बन्धी समस्या बढी देखिने गरेका छन्”, साउद भन्छिन्, “म त जन्मान्तर गर्नुपर्छ भनी सचेत छु । सन्तान त योजनाबिना जन्माउने कुरा होइन । दम्पतीबीच सल्लाह गरेर जन्माउने हो, हामीबीच सल्लाह छ ।”
सन्तानबीचको फरक नभई बर्षेनि बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ । जसको उदाहरण हुन् कैलालीकै सीतादेवी विक । उनी तीन सन्तानको आमा हुन् । दोस्रो र तेस्रो सन्तानबीच मात्र १५ महिनाको जन्मान्तर भएका कारण हाल उनले धेरै समस्या भोगिरहेकी छिन् । रोजगारका सिलसिलामा पति भारतमा भएका कारण उनलाई झन् समस्या भइरहेको छ । “मेरो स्वास्थ्यमा धेरै समस्या छ । पाठेघरमा समस्या भएका कारण आजभोलि गर्हुँगो काम गर्न सक्दिनँ, तल्लो पेट दुख्ने, ढाड दुख्नेजस्ता समस्याले सताएको छ”, सीतादेवीले भनिन्, “चिकित्सककहाँ उपचारमा जाँदा सुत्केरी अवस्थामा स्याहार भएन भन्छन् । मैले लगातार बच्चा जन्माएकै कारण यस्तो समस्या भोगेकी हुँ ।”
बर्षेनि सन्तान जन्माएकै कारण समस्या भोगेकी टीकापुर–७ की सुदेश्नी डगौराको र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या छ । डगौराले पाँच वर्षमा तीन बच्चालाई जन्म दिइन् । “पहिलो बच्चा छोरा जन्मियो, पहिलो बच्चा १७ महिनाको थियो, छोरी जन्मिइन्, दोस्रो सन्तान पनि हुर्कन नपाउँदै अर्को छोरी जन्मिइन”, सुदेश्नीले भनिन्, “पाँच वर्षमुनिका तीन बच्चा कसरी स्याहार्नु ? मलाई निकै दुःख छ । पति ज्यालादारी गर्न दिनभरि घरबाहिर हुन्छन् । म एक्लैले तीन बच्चा स्याहार्न कठिन भएको छ ।”
सुदेश्नीको स्वास्थ्य कमजोर छ । उनको मात्र होइन तीनै बच्चा पनि स्वस्थ छैनन् । “एउटा बच्चालाई कुपोषण भएको छ । बच्चा बिरामी भइरहन्छन्”, उनी भन्छिन्, “पतिको कमाइ थोरै छ । बच्चाको उपचार गर्नु कि, आफूले खानु रु उपचारमा धेरै खर्च भइसकेको छ ।”
गाउँघरमा पछिल्लो समय जन्मान्तरका लागि अस्थायी साधनप्रति दम्पतीको आकर्षण बढिरहेको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भनाइ छ । सन्तानबीच जन्मान्तर राख्नेबारेमा आफूहरुले पनि समय–समयमा जन्मान्तर र अस्थायी साधन प्रयोगबारे छलफल र जानकारी दिने गरेको जोशीपुर गाउँपालिका–१ का महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दुर्गा चौधरी बताउँछिन् ।
सन्तानबीच जन्मान्तर कायम गर्नेको सङ्ख्यामा सुधार आएको छ । अधिकांश परिवार जन्मान्तरबारे सचेत बन्न थालेका छन् । “हामी पहिलो बच्चा जन्मनेबित्तिकै जन्मान्तर र अस्थायी साधन प्रयोगबारे दम्पतीलाई नै सल्लाह दिन्छौँ, हामीले बर्सेनि सन्तान जन्मँदाको असरबारे जानकारी दिन थालेका छौँ”, उनी भन्छिन्, “जन्मान्तरमा ध्यान नदिए महिला र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ ।”
सन्तानबीच जन्मान्तर नहुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । सन्तानबीच जन्मान्तर नहुँदा महिलाको पाठेघरमा विभिन्न समस्या आउनुका साथै रक्तश्राव हुने र गर्भ नरहने हुनसक्ने टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स कल्पना खड्का बताउँछिन् । “बर्षेनि सन्तान जन्माउँदा आमा र बालबालिकामा मानसिक र शारीरिक समस्या आउने गर्दछन् । मातृ तथा बाल मृत्युदर बढ्ने जोखिम रहन्छ”, स्टाफ नर्स खड्का भन्छिन्, “बर्षेनि जन्मिएका सन्तानको स्याहारसुसार राम्रो हुँदैन, बच्चाको मस्तिष्क विकास हुने समयमा स्याहार नपाएको बच्चा कस्तो होला रु त्यसैले हरेक दम्पती सचेत हुनुपर्छ ।”
स्टाफ नर्स खड्का टीकापुर अस्पतालमा सेवा लिन आउने हरेक गर्भवती र बच्चाका आमालाई जन्मान्तरबारे जानकारी दिने गरेको बताउँछिन् । “सेवा लिन महिला आउँछन्, बच्चा जन्माउने कुरा दम्पतीबीचको सल्लाह हो”, उनी भन्छिन्, “हामीले श्रीमान पनि ल्याएर आउनु भन्छौँ, सन्तानबीच कम्तीमा पनि तीन वर्ष जन्मान्तर राख्न सल्लाह दिन्छौँ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिले पनि जन्मान्तर आवश्यक छ ।’’
अवैध काठसहित २ जना पक्राउ
काठमाडौँ– अवैध काठसहित भीमदत्त नगरपालिका–७ हल्दुखालका दुई जनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ
खैरो हिरोइन लिएर नेपाल आउँदै गरेका तीन भारतीय पक्राउ
काठमाडौँ– कञ्चनपुर प्रहरीले आज लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित तीन भारतीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ
धादिङमा ट्याक्टरको ठक्करबाट अधिकारीको मृत्यु
काठमाडौँ– धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–३ अमराईमा आज भएको दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ
सभामुख सापकोटा र अस्ट्रेलियाका राजदूतबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसीटी जेन भोल्कबीच आज
पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि, निगम अझै घाटामा
‘कानुन भन्दा नैतिकता ठूलो’- रामकुमारी झाँक्री
“म माथि हमला भई हाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु”- प्रधानमन्त्री
'नेकपा' नै धरापमा ! ३ दिनपछि आउनेछ फैसला
करीना कपूरको घरमा रिसाए अर्जुन कपूर, भएको के
मन्त्रिपरिषद बैठकः यी हुन् महत्वपूर्ण ३२ निर्णय
सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई ५३ सिट जोगाइदिएको हुँ :
"म माथि हमला भई हाल्यो भने पनि अनौठो